HomeKit News: Zvese zvaunoda kuziva!
Inogara ichitsvaga mhinduro yeKeKK neKeKit-enabled-accessory news!
Kutenda kuApple's HomeKit chimiro, makambani mazhinji anokwanisa kugadzira smart home zvigadzirwa zvinoshanda pamwechete munzira yakachengeteka, mushandisi ane ushamwari. Kubva kuHomeKit pairing process kusvika pakushandisa iPads neApple TVs sePamusha yeKit hubs mukati meimba, Apple yakarongedza nenzira yakajeka yekudzora zvigadzirwa zvako zvepamba zvakangwara. Kuzivikanwa kwechimiro kunoreva nhau dzeHomeKit neHomeKit-inogonesa michina kupwanya nguva yese; bhukumaka iri peji uye tarisa kudzoka kazhinji kune ichangoburwa, hukuru, kana zvakanyanya utsinye smart kumba nhau.
Nyamavhuvhu 9, 2017 - Chamberlain's HomeKit-inogonesa MyQ Home Bridge ikozvino yave kuwanikwa!
Kana iwe wanga uri itchin 'kuti utore iyo HomeKit-inogonesa garaji gonhi rinovhura, Chamberlain's yakarongedza MyQ Home Bridge zvinogona kunge zviri zvauri mushure! Iyo MyQ Home Bridge inowedzera HomeKit kuwirirana kune chero inotevera ye MyQ-yakagonesa garaji magonhi ekuvhura:
Chamberlain uye LiftMaster MyQ-yakagadziriswa gedhi remasuo
Chamberlain neLiftMaster Wi-Fi vakagonesa gonhi remugariro wegaraji (MyQ Home Bridge inowedzera HomeKit kuenderana, kutonga kwefoni ikozvino kunosanganiswa neWi-Fi vanoshamisira)
Chamberlain naLiftMaster MyQ Garage
Chamberlain naLiftMaster MyQ Lighting Controls (mienzaniso WSLCEV, PILCEV, 823LM uye 825LM)
Chamberlain uye LiftMaster Internet Gateway (MyQ Home Bridge inotsiva kadhi iyi uye inowedzera HomeKit kuenderana)
Kana iwe uchida kukwanisa kutarisa nezve chimiro chemusuwo wako wegaraji paunenge usiri pamba (wakayeuka kuti uvhare?), Tonga gonhi rako regaraji neiyo Imba yeApp yeApp uye izwi rako (Hei Siri, vhura gonhi rangu regaraji), uye gadzira mashechi ekuvheneka kweMyQ, iwe unofanirwa kusunga sosi yeMyQ Home Bridge ichiri kutengeswa ne $ 49.99.
Ona pa Chamberlain
Chikunguru 12, 2017 - Apple inowedzera chiitiko cheHomeKit kusarudza Apple nzvimbo dzekutengesa
Apple ine akawedzera kuyanana kweKeKit uzoefu ku46 yenzvimbo dzayo dzekutengesa pasirese. Vashanyi kunzvimbo idzi vanogona kuwana zano rekuti zvakadii kushandisa Apple's HomeKit tekinoroji kudzora maKenKit-akagonesa zvishandiso uchishandisa Siri, iyo Kumba app pane iOS, uye HomeKit apps.
Nzvimbo dzekutengesa dzinonzi dzinoratidzira HomeKit-yakagonesa mumvuri, kuvhenekera uye mafeni. Mumwe munhu anoda kudzidza zvishoma nezveHomeKit anogona kuona kuti zviri nyore sei kutendeuka pane fan, dhizaini mumvuri, uye nekudziya kweruvara rwemwenje mukamuri. Iyo inzira yakanaka yekufadza vanhu nezve automation yemba uye kuita kuti vatenge HomeKit-inogonesa zvishongedzo mukati mezvitoro zvinotengesa.
Kufamba kwakangwara naApple; Ndakaona izwi rekuti "HomeKit" rakasangana nezvakawandisa zvisina matanho ekutenda kuti tekinoroji ino zivikanwa kwazvo kwete unoda zviitiko zvakadai. Nzira yakanakisa yekuti mumwe munhu anzwisise simba (uye inonakidza) yeimba yakangwara ndeyekupa iyo kuenda. Tine tariro Apple inofunga kuunza iyo HomeKit ruzivo kune zvimwe zvezvitoro zvaro zvechitoro. Maererano neTechCrunch, shanduro isingashandisi yeiyo itsva HomeKit chiitiko ichapihwa kune dzose nzvimbo dzekutengesa kambani.
June 29, 2017 - Koogeek's nyowani ExNUMX HomeKit-inogonesa bulb iri pano - uye nderudzi rwegurovy!
Koogeek achangobva kuzivisa imwe itsva yeKeKit-yakagadziridzwa ye-Wi-Fi smart bulb uye ndirege ndiudze, vanhu, chinhu ichi siyana. Yakaita kunge yakaumbwa sekisiboribra bulb, asi usairega ichikunyepedza iwe - iyi ndiyo bulb yekumhanya-kwako kwechigayo socket (E26 kuUS uye E27 kuEU). Iyo inosangana zvakananga kune yako yeWi-Fi network saka hauzofaniri kushandisa hub kana bhiriji (saPhilips Hue kana Lutron Caséta).
Chimiro chayo chakasiyana uye zvakagadzirwa zvakanaka, asi chii chinonyatsoita kuti bhobhi iyi ioneke mutengo wayo. Inotora $ 37, ichiita imwe yezvinhu zviduku-zvinodhura Wi-Fi-zvakabatana neKit-enabled multicolor bulbs pamusika. Pamutengo iwoyo unowana a zvishoma zvine musoro kufunga nezve-kukwidziridza kwese kuHomeKit-yakagonesa mwenje. Chinhu choga chinomira seyakagona con is kupenya kwemwenje. Pa500 lumens iri kure zvishoma kupfuura iyo 800-lumen multicolor bulb inopihwa naPhilips Hue.
Ini ndiri kuzoverengera mashoma eaya matsva eKoogeek mababu munguva pfupi, saka ive watarisa kune zvishoma ruzivo! Kusvikira panguva iyoyo, heino chati chaicho neicho-iwe-chaunoda kuziva:
Gwaro reSeti E26 (Medium screw base)
Rated simba 8 watts
Bulb yakaenzana 60 watts
Nhamba yemavara 16 miriyoni mivara
Color tembiricha 2700K-6000K
Bhupenyu hupenyu 25,000 maawa
Beam angle 199.9 °
zvinhu Plastiki uye Polybutylene terephthalate (PBT)
chiyamuro 120V AC, 60Hz 0.2A (Max.)
Zvitsva zvekugadzira zvinhu uye zvinhu zviri kuuya kuKeKKit muIOS 11!
Apo iOS 11 inokonzera zvigadziriro izvi kuwira, vashandi vekumba vakanaka vanogona kugadzirisa nezvimwe zvitsva zvitsva uye michina itsva itsva.
Nzvimbo-yakagadzirwa nemaoko: Nzvimbo-yakavakirwa otomatiki ari kuzove akazara ane simba rakawanda, huya iOS 11. Automation inogona kukonzeresa zvichienderana nenzvimbo yevanhu iwe yaunokoka kudzora yako Kumba Kit. Izvi zvinoreva zviitiko nemidziyo zvinogona kudzorwa kana mumwe munhu achisvika kumba, kana vanhu vazhinji vasvika kumba, kana mumwe munhu achibva pamba, kana pakawanda kubva pamba. Automation inogona zvakare kusungirirwa kune yakasarudzika kukosha: "Chete kungokonzeresa iyi automation apo pasina munhu ari pamba, "" Chinongomutsa iyi mota kana paine munhu kumba, "kana" kungokonzeresa mota iyi kana munhu wese aripo kumba. "
Nguva itsva-based automations: Kune akati wandei chitsva nguva-based automation sarudzo dzinopa kupfuura kungova zuva uye kubuda kwezuva / kwezuva zvinokonzeresa. Iwe unogona kuseta nguva yakatarwa, unogona kukonzeresa otomatiki pane imwe nguva nguva isati yasvika kana zuva rabuda kana kuvira, uye iwe unogona kukonzeresa otomatiki kwenguva yakatarwa ((vheneka mwenje uyu kwemaminetsi gumi kana ndasvika kumba woidzima. kana nguva yapfuura ”).
New accessories: HomeKit-inogonesa kusaswa uye faucets yakawedzerwa kune iyo HomeKit chimiro. Kunyange iwe haugone kutenga chero HomeKit-inogonesa faizets kana zvinosaswa, zvinokwanisika pachave nezvigadzirwa zviripo kana iOS 11 inotumira uku.
Mai 31, 2017 - Elgato inozivisa HomeKit-inogonesa Eve Degree tembiricha uye humidity sensor
Elgato nhasi akazivisa mutauro wayo mutsva Evha Degree kushambidzira nekunyorovesa sensor. Chigadzirwa, chinoshanda neApple HomeKit, chiitiko chinoshamisa kune Elgato Eve Weather. Kusangana ne--board temperature uye humidity sensors uye IPX3 certification, Evha Degree yakawanda pamba kunze sezvazviri mukati.
Maumbirwo ayo anoyeuchidza Apple mukuti inoratidzira yakanaka aluminium enclosed uye glossy nhema kumberi. Zvirokwazvo hachisi chinhu chauchanzwa kuda kuvanda seri kwesofa kana kuseri kweruva.
Mai 25, 2017 - Wemo ichawana HomeKit rutsigiro kuburikidza neKomoKit-inogonesa Wemo bhiriji
Muchengetedzi wekutsvaga mudzimba weBlue Belkin wakazivisa Wemo line ye smart smart products ichashanda neApple HomeKit gare gare uku kudonha. Iyo kambani inoronga kuburitsa HomeKit-inogonesa bhiriji inozobatanidza kune network network.
Iko Bridge yeWemo inobatanidza chero ipi neipi yemusha ye-Wi-Fi router nekambani yeEthernet inoita kuti HomeKit iwirirane kuWemo smart plugs uye chiedza chekudzidzira mumba. Bhiriji iyo inoshandisa iyo Wi-Fi yebamba router kuti inotumira HomeKit zvigadziro kubva kuSiri akagonesa madivayiri akadai seApple iPhones, iPads uye Apple zvinotarisa kuWemo smart plugs uye switch light.
Iwo mapurogiramu ekambani uye mashandiro akareruka achazungunurwa kuburikidza neese Siri uye Apple's Home app yeApp. Zvigadzirwa izvi zvakare zvichashanda neese maapuro anoshandisa Apple's HomeKit chimiro. Belkin haasati azivisa mutengo webhiriji asi isu tichava nechokwadi chekugadzirisa iyi post nekukurumidza ruzivo ruripo!
Mai 23, 2017 - IKEA's Trådfri smart yekuvhenekesa system yekushanda neApple HomeKit
IKEA's smart light range, iyo inopa smart bulbs, magetsi ekupenya, uye nemwenje akajekeswa eIKEA cabinetry, ichave iri kuwana Apple HomeKit rutsigiro pane imwe nguva muzhizha kana kudonha. Iyo smart mwenje system inoshanda zvishoma saPhilips Hue mukuti zvigadzirwa zvemwenje zvinotora macites avo kubva kune imwe bhiriji repakati inobatanidza kune yako network network.
Heano akasakara shanduro (thank you, Google Dudziro) ye imwe yakabva kubudiso chekubudisa:
Muzhizha uye kudonha vachakwanisa kubatanidza mwenje yavo yekuchenjera neAmazon Alexa kana Google Mubatsiri uye kumisikidza nekugadzirisa mwenje uchishandisa Apple Home app uye voita kuti ibate pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pamwe neHomeKit, Google Assistant neAmazon Alexa - senge Thermostats, gonhi rekiyi, sensors, siling fan, mapofu uye zvimwe.
Hazvizivikanwe kuti IKEA ichaburitsa here bhiriji rakagadziridzwa muzhizha kana kudonha kana kana bhiriji razvino rinogona kuvandudzwa kutsigira Apple HomeKit. IKEA yakanakisa yemwenje huwandu inoratidza humwe hudiki-hunodhura ngwara zvishandiso pamusika. Ine wireless dimmers, mafambiro sensors, isina waya remotes, uye zvimwe, IKEA's system inokwikwidza yakakwikwidza über yakakurumbira Philips Hue mutsetse.
May 17, 2017 - Logitech POP Smart Button ikozvino inowanikwa muApple Stores uye online
Logitech itsva HomeKit-yakagonesa smart bhatani, iyo Logitech POP, ikozvino yave kutengwa yekutenga muApple zvitoro zvekutengesa. Iyo Logitech POP Smart Button Kit inosanganisira yakagadziriswa HomeKit-inogonesa bhiriji iyo inogonesa zviri zviviri Siri inzwi kudzora uye kusangana kuburikidza neImba app yeApp.
Kana iwe uine shungu dzekuisa maoko ako paPOP idzva uye usingakwanisi kusvika kuchitoro cheApple, ramba uchiongorora chitoro chepamhepo cheApple - Logitech anoti inoronga kutengesa iyo POP muchitoro chepaApple online pasati yasvika kune zvimwe zvitoro gare gare gore rino. .
Iwe unogona zvakare kutarisa saiti yaLogitech uko yakagadziridzwa POP kitodhini ikozvino haisi paboka. Iwe unogona kukwanisa kutenga chigadziriro apo stock inodzoka!
Iwe unogona kuverenga zvakawanda pamusoro peKeKKit yakabvumira bhora re Logitech POP pano:
Zvese zvaunoda kuti uzive nezveLogitech's new HomeKit-inogonesa POP Smart Button
Mai 9, 2017 - murume weQuadriplegic anoshandisa HomeKit uye kuwanikwa kweApple kusimudzira kusununguka kwake
NBC News yakabudisa nyaya inopa simba nezano mupi wezano weTI anonzi Todd Stabelfeldt uyo anoshandisa Apple's HomeKit chimiro kurarama hupenyu hwakazvimiririra. Stabelfeldt ndeye 38-makore-emakore quadriplegic murume, semugumisiro wekukuvara paakanga aine makore masere, akange asina kana kufamba pasi pemapfudzi ake kweanopfuura makore 30.
Uchishandisa HomeKit-yakagonesa nhumbi kwaari anozvitumidza, "Quadthedral" smart imba, Stabelfeldt anokwanisa kuwedzera Siri neApple's Home app kuti aende nezvezuva rake:
Zvimiro zvakaita seApple's "Imba" app inobvumira Stabelfeldt kudzora akasiyana siyana akachekwa mumba make - kubva pamakaki uye nemadziro ewindo, kumwenje nemusuwo wake wegaraji. Icho chikamu chakanakisa cheStabelfeldt? Anogona kuraira Apple's akangwara dijiti mubatsiri Siri kuti arishandise rose.
Paanenge asiri kushandisa izwi rake kudzora hunyanzvi hwekushandisa kumba, Stabelfeldt anoshandisa Apple Shandura Kudzora software inomubvumira kushandisa hardware yakakosha yekutonga iOS pasina kushandisa maoko ake.
Izvo zvinoshamisa chaizvo kuona kuti Stabelfeldt anotora sei tekinoroji iyi ndokuishandisa kuti asangowedzera rusununguko rwake, asi anovandudza mashandisiro ainoita mumba make. Ndinokurudzira kuti verenga nyaya yacho paNBC News - muenzaniso unogunzva wekuti tech inogona kuvandudza hupenyu hwedu uye chiyeuchidzo cheizvo isu dzimwe nguva tinotorega. Ini ndinofunga kuti pfungwa dzakabatwa zvakakwana mune izvo Apple's Sarah Herrlinger akaudza NBC Nhau:
Kune vamwe vanhu, kuita chimwe chinhu chakafambisa chiedza chenyu kana kuzarura mapofu kana kushandura chetmostat yako inogona kuonekwa sechinhu chiri nyore, asi kune vamwe, iyo inomiririra simba, nekuzvimirira, nekuremekedza.
May 3, 2017 - ecobee inosheedzera Alexa- uye HomeKit-inogonesa ecobee4 smart thermostat
Ikati yabuda muhombodo, vanhu, uye iyo Alexa-inogonesa ecobee4 smart thermostat ndeyechokwadi uye inotyisa kwazvo!
Ecobee4 inouya nemakrofoni akaiswa mukati-kurema izwi kuziva (iyo teknolojia inoita kuti Amazon Echo ikunzwire kubva kune imwe nzvimbo) uye mukurukuri anoita kuti sound inonzwike zvakanaka uye yakajeka, pasinei nekubva kune thermostat yakasungirirwa kumadziro ako.
Izvi zvinoreva kuti pamusoro pekuva nezvakakura zvakafanana ecobee3 (HomeKit-inogonesa, satellite kamuri sensors, simba rekuchengetedza simba), unogona kushandisa iyo ecobee4 nenzira imwechete yaungashandisa Echo, Echo Dot, kana Bata. Kumbira Alexa kuti ishe timer, gadzirisa mwenje, ikupe matanho kune imwe nzira yekubheka, tamba imwe jangi - iwe unogona kuzviita zvese rudyi kubva pane yako smart thermostat.
Ecobee4 inowanikwa pakutangira-kutarisa panguva ino; iyo Alexa-yakashandisa smart thermostat ichakukurira $ 249.
Ini ndichangowana email mangwanani ano kubva kuEcobee iyo iri kunyora pane chimwe chinhu chikuru ichiuya kubva kukambani paMai 3. Heano wakadzingwa kubva kune iyo email pamwe neiyo animated GIF inoratidza chimwe chinhu chinotyisa kuziva:
Tine chimwe chinhu chakakura mumabasa uye tinoda kuti iwe uve mumwe wevanhu vakatanga kuziva kuti chii.
Ngatimbotii zvakakodzera kutaura nezvazvo.
Ecobee anoti ichave ichiita chiziviso papeji yayo ye Facebook kuburikidza ne Facebook Live. Unogona kuramba uine ziso Ecobee's Facebook peji by Kudai it. Ini ndichagadzirisa iyi post paMay 3 nechero ruzivo rwunogovaniswa nekambani!
Yakabvumira Ecobee 4 yekudhinda zvinhu zvinokonzera
vava kuda Ichangobva kuita mangwanani angu. Nzvimbo iyi yakagovana nekubwinya kunobva kuna Dave Zatz weZatz Kwete Kunakidza iyo inoratidza Ecobee inotevera smart thermostat yave kuda kuwana yakakwana yakawanda. Zvinoenderana nezvigadzirwa zvekushambadzira zvigadzirwa zvakawanikwa neZatz, iyo ecobee4 smart thermostat ichaisa iyo Amazon's Alexa smart mubatsiri.
Rega ndive akajeka: Hatisi kutaura Amazon Alexa rutsigiro - iyo ecobee3 yatove inoratidza Alexa rutsigiro - tiri kutaura tese-pa, yakavakirwa-mu Alexa. Zatz Kwete Kunakidzwa ichangobva kugoverwa zvikamu zveCCC iyo inoratidza mutauri kuseri kwechombo. Izvo zvitsva zvekushambadzira zvinhu zvinoratidzira LED mwenje strip mhiri pamusoro wepamusoro weiyo kifaa inoyeuchidza nezvezvimwe zvinoshandiswa neAn-Enified zvishandiso. Uye kuti urege kufunga kuti ichave nzira yakasarudzika yekugadziridza tembiricha mumba mako, izvo zvekushambadzira zvinoratidzika kunge zvinopa imwe pfungwa. Kubva kuZatz Kwete Kunakidza:
Ichangobva kuwanikwa ecobee4 zvigadzirwa zvekushambadzira zvinosimbisa huvepo hwe Alexa… .. kwete kungo shandura munhu tembiricha kuburikidza nekuzivikanwa kwekutaura, asi kusimudzira akawanda kana asiri ese eAmazon izwi rekubatsira izwi.
Ini ndinogona kana ndisina kunge ndisina kutuka nemufaro pandakasangana neleak (ndakanyatsoita). Rudo rwangu rwe ecobee3 Smart Thermostat rwakanyorwa zvakanyatsorongeka: Iyo yepamusoro sisitepisi kune inozivikanwa Nest Kudzidza Thermostat, chinhu chinoshandiswa neKumbaKit-chinogonesa, inoratidzira kure kukamuri sensors (izvo wo HomeKit-inogoneswa), uye inosangana neinenge yega yega smart kumba. Kuti Ecobee anogona kuvaka Alexa mumudziyo inoita kuti rudo rwangu rukure 10 saizi. Ndiri kuzonakidzwa nekuva neAlpha mune imwezve nzvimbo mumba mangu, asi ini ndinofunga kuti pane chimwe chinhu chakakosha apa: Vamiririri vasati vachiwedzera anogara-akangwara mubatsiri kune yavo yakasarudzika yekumusha imba inogona kuuraya shiri mbiri dzakangwara neimwechete yakangwara. ibwe. Thermostats inowanzoiswa munzvimbo dzepakati mukati meimba; kuwedzera smart thermostat mashandiro uye ari mubatsiri anonzwika munharaunda, zvose mukutenga kumwe ndeye fan-friggin'-tastiki dhizaini.
Tichiri pazvinhu zvekubhururuka uye runyerekupe, shamwari dzedu paTirifter dzakavhura mutengo wakaderedzwa we $ 60 pane ecobee3 smart thermostat. Izvi zvingave zvichideredzwa pazvikamu kubva ku ecobee chiratidzo chekuti chiri kuedza kudzima stock ye ecobee3 usati waunza ecobee4? ? ‍♀️ Handisi sayin '… Ndiri kungoti sayin'.
Snag yakanakisa Ecobee3 smart thermostat pane imwe yemitengo yakanaka kwazvo yatakaona
May 3, 2017 - Brookfield Residence ichapa HomeKit kuwirirana seyakafanana mune idzva dzinovaka
Kumba kamba kambani Brookfield Residential inoti ichaita kupa HomeKit kuwirirana munharaunda yese itsva inovaka seyero. Iyo Delano nharaunda muIrvine's Eastwood Village ndiyo ichava yekutanga kugarisana kuwana HomeKit-inogoneswa dzimba. Brookfield Residence ichapawo HomeKit kuwirirana mune dzinotevera nharaunda.
The Collection in Playa Vista
Flora, Prado, uye Haciendas kuEscaya kuChula Vista
Vientos, Candela, uye Terracina paRarcho Tesoro muSan Marcos
Beverly ku Eastwood mu Irvine
Citrus muPamende paRosedale muAzusa
Vakasungwa paEdenglen muOrway Ranch
Nepo vadzidzisi vemusha vachakwanisa kuwedzera chero zvipi zvese zveKeKit-enabled nazvo kumba kwavo uye vanofunga kuenderana nehurongwa hwavo, Brookfield Residential ichabatanidza zvinhu zvinotevera muzvivako zvitsva:
Lutron Caseta chiedza
Honeywell Lyric T6 Smart WiFi Thermostat
Mushandi weimba achasanganisirawo Ubiquiti Wireless Access Points muimba yekuvandudza kushandiswa kweWi-Fi kwekushandisa kweKeKit-enabled uye internet.
Brookfield Residence inoti chengetedzo yakakura mukana weApple's HomeKit sisitimu uye yechitatu-bato HomeKit-inogoneswa zvishandiso:
Kubatsira kweKoKit kunowedzera kune chengetedzo uye kuvanzika, nekuti kutaurirana kubva kune iyo iOS mudziyo uye zvemidziyo midziyo zvakavanzika, iine data rese repamba rinogara pachivande pachigadzirwa, risina kuchengetwa mugore
Unogona kuverenga zvakawanda nezveBrookfield Resource yakabatana pamba kuedza pano.
Kubvumbi 25, 2017 - Hubbell Inc. inowana iDevices
Hubbell Incorporated, iyo inogadzira zvinhu zvemagetsi uye zvemagetsi, akawana iDevices, LLC. Sei? Heano iDevices 'tsananguro:
Nokubatana nemhuri yeHubbell, iDevices inochengetedza kutsigirwa uye kugona kwemutungamiriri akasimbiswa-indasitiri, nepo Hubbell ichisimbisa injini yayo yekuvandudza nezivo yeDevices uye hunyanzvi muInternet yezvinhu zvakabatana.
iDevices inoita yangu-yenguva dzose kufarira Wi-Fi smart switch uye ini handina kukwanisa kubatsira asi kuvhunduka pandakanzwa iyo kambani yakanga yatengwa; Ini handidi kuti chero chinhu chiitike kune yakavimbika kwazvo, inonyanya kushandisa-ushamwari, inonyanya kunakidza inofadza smart switch munhu angabvunza!
Kunyange zvakadaro, kubva muhurukuro yehurukuro, zvinonzwika seHubbell akakodzera kambani:
Kubatanidza ruzivo rweDevices mukugadzira uye kugadzira smart dzimba mhinduro nehunyanzvi hweHubbell mukugadzira nekuparadzira kwese kunogara, kutengesa nekutengesa misika kuchaisa hwaro hwakakwana hwekubatana muIoT pamwero wakakura.
Mune mamwe mazwi, Hubbell anoda zvishoma zvepaintaneti zvinhu zvinhu kudzoka kuitira kugovana kuri nani kune vatengi vese kwekugara nekutengesa / maindasitiri. Heck, sekureba sekuita kwaHubbell kuri kuita IoT kudzidza, Ndinofunga iDevices iri mumaoko akanaka.
Kubvumbi 18, 2017 - Logitech inosheedzera yekutanga HomeKit-inogadziriswa bhatani bhatani
Logitech achangobva kuzivisa yekutanga Bhokisi reKit-enabled rakagadziridzwa, sekusimudzira kune iyo kambani Logitech POP Smart Button.
Bhodhi yakagadziridzwa, mumitemo yeKeKit, isipi inogona kuita zviratidzo zvakasiyana uye zviito zvezvinhu zvako zvakasiyana-siyana zveKeKit-enabled. Zvichienderana nebhokisi, zviratidzo zvakasiyana zvinogona kukonzera zviito zvakasiyana. Isa mukutaura kwenyama, iwe unorova bhodhi uye zvinhu zvinoitika mumba mako: Iwe unogona kunge wakagadzika kuti uise magetsi ose mukicheni yako, udzikise thermostat, kana kuvhara suo rokunze - mikana isingagumi! The Logitech POP Smart Button ndiyo chete yekutanga yeKitenda yakagadzirirwa yakagadzirirwa; iwe unogona kutengesa makambani akawanda anoita zvigadziri zvinogadzirirwa zvega.
Iyo POP Smart Button idiki (2.36 mu x 2.36 mu) programmable bhatani inouya mune ina mavara: chena, coral, teal, uye alloy. Kuti utore zvinhu zvinofamba unenge watenga iyo POP Smart Button Starter Kit - iyo inosanganisira chena POP, tuchena tuchena bharanji chishandiso (saizi yakafanana nePOP), uye yekuisa tepi ye "stickin 'yako Smart Button chero kwaunoda! Mushure mekunge maina POP bhiriji, unogona kutenga akawanda akawanda mabhatani auri kuda mune chero mavara andaitaura kare. Hauzofaniri kutenga mutoro wePOP yekudzora kamuri, nekuti imwe neimwe POP inotsigira tatu kupatsanurana zviito: kudzvanya kamwe, kudzvanya kaviri, uye kupwanyira uye kubata zvese zvinokonzeresa zviito zvakasiyana. Iwe zvakare haufanire kutenga mutoro wemabhatiri kuti POP isashande. Logitech anodaro bhatani replaceable bhatiri inopera makore mashanu.
POP yakagadzirirwa neKeKit inotsigira chero zvinhu zveKeKit-enabled. IPOP zvakare inobatsira zvinotevera zviyero:
Lutron chiedza uye mumvuri
Mamwe maHarmony remotes uye hubs
Saka riini uye kupi iwe unogona kuwana imwe? Rini? Logitech anodaro munguva pfupi. Kupi? Iyo POP Smart Button Kit uye POP Wedzera-pa Smart Button, kwenguva, ichave yakasarudzika kuzvitoro zveApple uye pane saiti yeApple. Iyo Kit uye Bhatani icharova vamwe vatengesi gare gare gore rino. Kana iri mutengo, iyo POP ndiyo imwe yezvishoma-zvinodhura HomeKit-inogadzirwa zvigadzirwa Ini ndauya!
POP Smart Button Kit: $ 59.99
Wedzera-pane POP Buttons: $ 39.99
Iwe unogona kutarisa vhidhiyo ino kuitira kuratidzwa kweLogitech POP Smart Button.
Kubvumbi 16, 2017 - HomeKit-inogoneswa, WiFi-yakabatana iLuv Rainbow8 mababu iye zvino avepo
Underneath the Lights chikamu pa Pekutsva yeAppKit peji mabara akati wandei achiti ari kuuya munguva pfupi. Iyo iLuv Rainbow8 bulb ichangorova vamwe kuenda kunopinza. Iyo Rainbow8 ine WiFi-yakabatana, HomeKit-inogonesa bulb yakafanana yakafanana naPhilips Hue White uye Ruvara bulb.
Iyo iLuv Rainbow8 bulb iri 60W yakaenzana lightbulb - zvinoreva kuti uri kutarisa kubuditsa kwemwenje kwe800 Lumens. Uye, sekumwe chero rimwe bhururu ye LED, iwe unogona kuverenga pamusoro peiyo 20,000 maawa ehupenyu hwebhalb. Iwo mababu anogona kudzikira uye kuchinja ruvara. iLuv inotaura kuti kune anopfuura emamiriyoni emamiriyoni e16 mukana wekusarudza kubva.
Ndiri mhando yerudo neIuv nzira yekutaurirana chimiro. Heano maviri mameseji mameseji mameseji uye nzira yavan kutaurirana nayo neibhururu mavara:
Kutsvaga WiFi network: inopenya mutsvuku
Dzorerai WiFi router info: kupenya mishanu mavara (tsvuku, ruvara, ruvara, ruvara rwebhuruu uye ruvara rwepepuru) uye shanduka kuchena mutema
OTA firmware upgrade yakakundikana: kupenya mutsvuku
Chimwe chezvinhu chinogadzika bulb iyi parutivi (uye chimwe chezvinhu iLuv inoramba ichidudza mukopi yaro yekusimudzira) kubatana kwayo kweWiFi. Mazhinji smart bulbs anoshandisa angave ari Bluetooth LE kana bhiriji kutumira uye kugashira kutaurirana. Paunopa rairo kune yako Philips Hue mababu, iwe uri kunyatso kupa iwo mvumo kuPhilips Hue bhiriji. Bhiriji racho rinobva raudza mababu zvavanofanira kuita. Kune Bluetooth LE, urikushandisa ingangoita-isina kuvimbika bhatani yekubatanidza maBluams kudzora maburi ako - iWiFi inoita kunge inobata kupindira uye chinhambwe chiri nani kupfuura Bluetooth LE.
Iyo Rainbow8 bulb inodhura $ 49.99. Izvo zvakafananidzwa nePhilips Hue White uye Colour bulb, asi pane chimwe chinhu chakakosha kufunga mukuenzanisa mitengo: Imwechete yePhilips Hue White uye Colour bulb inodhura $ 49.99 asi iwe uchiri kutenga bhiriji raPhilips Hue kuti utongere akati mwenje. Paunotenga iyo $ 49.99 iyo Rainbow8 bulb, ndidzo chete zvaunoda kutenga - ipakeji imwe izere - bulb uye yekubatanidza - pahupamhi.
Kurume 10, 2017 - WeberHaus dzimba dzepasati-dzekupfekedza HomeKit kutonga
Apple yave kutambisa HomeKit satellite pamatafura maviri: kubatanidzwa kwechigadzirwa uye kuvaka kwedzimba. Sezvo zvakanyanya uye zvakawandisa HomeKit-zvigadzirwa zvinowanika pamusika, vakawanda uye vavaki vekumba vari kupa HomeKit kubatanidzwa sechimwe chikamu chekuvaka.
WeberHaus, mudzidzi wekuEurope kumusha, ndiye muvakidzani wekupedzisira wekuvakira kupaKeKit control. Iyo kambani iri kuve ichigadzira dzimba dzakagara dzakagadzirirwa dzine hutano hwekambani hwekambani kwenguva yakati, asi gare gare gore rino ichapa dzimba dze-pre-mach nekuvakwa-mukati Kadhi kudzora.
Ndinofanira kutaura, ini ndiri mudiki (yakawanda) godo nezvezvinogoneka izvo zvakakwana zveKumba Kit-inogoneshwa imba inopa. Tora mutoro weiyi tambo kubva kuWebberHaus Press kuburitswa:
Newa Apple Home app, uye Siri, vatenzi vemusha vanogona kutonga masimba epamba epamusoro sekushisa kwepasi, mapofu uye magetsi akaiswawo pamwe chete nezvimwe zvekushandisa zveKeKit zvakagadzirwa zvinosanganisira mabhizi, magetsi, mavhavhajheni emagetsi, masheji ekuyera hutano hwemhepo nemvura kureva, uye zvimwe.
Kana iyo isina kunyura mukati, iwe unogona kudzora yako doggone underfloor heat with your doggone iPhone uye yako doggone izwi! Zvino ndizvozvo doggone ramangwana.
Ndakagara ndakabata kuti chikuru chipingamupinyi chemusha chinoshanda chakakwana uye zvakakwana hweti mukati meimba. Iwe haugone kunyatsonzwisisa iko kunaka kune imba yakabatana kusvika iwe uine mwenje wako, kupisa, makiyi, mikova, windows, vatevedzeri, etc. kushanda pamwe chete kukupa iwe unhu hwehupenyu hwako. Kutenderera pane bhomba rimwe chete muimba yako nefoni yako inotonhorera yekutanga kashanu kana katanhatu, asi simba rechokwadi rine nzvimbo yose inoshandiswa paunopinda.
Dai ndaigona kusarudza pakati pekuvaka zvishoma nezvishoma imba yangu yakabatana pane nguva nezvigadzirwa zvemunhu kana kutenga imba yakatopfekwa yakabatana, ndaisarudza yekupedzisira. Ini handisati ndatsvaga nzira (yet) yekuHomeKit yekugonesa kupisa kwangu kwepasi. Ine pre-machira WeberHaus kumba, ini handingadaro.
WeberHaus achange achiratidza imba yekuyeuka ine HomeKit kudzora pa "World of Living" kuratidzwa muRheinau-Linx. Kana iwe uchigara chero pedyo, ndinotarisira mafoto!
Kurume 3, 2017 - Apple inotanga mini saiti yakatsaurirwa kuHomeKit neye Imba ye app
Ndanga ndakamirira Apple kugadzira yazvino mini saiti kubva pandakatanga kunzwa izwi rekuti "HomeKit" nzira kumashure mu2014. Nzvimbo yacho, zvine rudo nested mukati mechikamu cheSpy chesaiti yeApple inobudisa firimu inofadza inoratidza zvimwe zvezvinhu zvakanakira zvaunogona kuita neKeKit-enabled accessories, Siri, uye iOS Home app. Pamwe, ndinofunga kuti gal iri muvhidhiyo ine nenzira yakawanda kwazvo HomeKit maficha, asi izvo hazvisi pano kana ikoko.
Kana iwe uchida kuziva, unogona kutarisa peji pane rinotevera link. Kana iwe uchida kuziva zvauri kutora iwe pachako kutanga, verenga!
Apple's HomeKit mini saiti
Iyo mini saiti ndeye zvese nezveK HomeKit, iyo Imba app, uye HomeKit-inogonesa zvishandiso. Iyo yakatsaurirwa kuti isangotsanangure izvo heck iyo diki iyo orange, imba-yakagadzirirwa tambo pane yako iPhone ndeye, yakatsaurirwa kutsanangura zvakanakira uye mukana wekushandira pamba neHomeKit neye Imba ye app.
Unogona kuwana chipfupi kutarisisa kweImba app, dzidza nezvekuKoKit pazera, Siri inzwi kudzora, HomeKit otomatiki, HomeKit-inogonesa zvishandiso, uye dzimba hubs. Iwe unogona zvakare kuwana rubatsiro nekuseta. Apple yakabatana neshoko rinotsigira ane zvakawanda zvekuziva nezvekugadzira zvigadzirwa zvako zvakasiyana-siyana muHome app.
Kunyanya kukosha, ikozvino pane peji rinoratidza zvose HomeKit-enabled accessories inogamuchirwa naApple. Peji yacho yakanyatsogadzirirwa uye inoparadzaniswa kuva yeruzivo rwemhando, saka unogona kutora (kana kutsvaga) kuti udikire pane chimwe chikamu.
Nyaya yacho inobatanidza zvinhu zvakasiyana-siyana (YESSSS!) Uye inopa mashoko pamusoro pekuwanikwa kwavo. Matati anowanika anosanganisira Yakashamiswa uye Kuuya manje manje. Hazvina kujeka zvakajeka izvo zvavanoreva, asi tinogona kushandisa zvirevo zvemamiriro ezvinhu kutsanangura:
Yakashamiswa: Zvimwe chigadzirwa chakaziviswa kekutanga kana HomeKit kuwiriraniswa kwaziviswa. Ini ndinowana fungidziro izvi zvinoreva kuti zvingave nenguva tisati taona chigadzirwa chiripo kuti chitenge.
Kuuya manje manje: Ini ndinoitora ino inhanho pamusoro "Yakaziviswa". Iyo chigadzirwa (kana HomeKit kuwirirana) chaipo pakona pakona. Ini ndinoshuva dai ndaziva chaiyo nguva yakatarwa, nekuti pane zvishoma zvishandiso pane rondedzero ini yandaiona.
Rondedzero yeApple yeKitKit-inogonesa zvishandiso zvinoshandiswa kuviga mudura rayo rakakura reApple Support database. Iri peji raive rakareba uye rakanyorwa zvinyorwa (pasina zvibatanidzwa!) yezviripo HomeKit-yakagonesa accessories - inouya accessories haina kunyorwa. Iyo zvakare haina kuvandudzwa kakawanda sekunge HomeKit-inogonesa gadgetry yakanga ichirova musika.
Iyi yakatsaurirwa site yakabatana pamwe chete Tim Cook achitsanangura maKiKit ake akazvigadzira mukupedzisira Apple mari yekufonera inondipa tariro uye mizhinji yemafaro eremangwana reKeKKit uye Apple's Home app. Ini rudo kuva neimba yakabatana uye zvakajeka Apple yakazvipira kuita imba yakangwara zvese zvinotyisa.
Kukadzi 15, 2017 - D-Link inozivisa Omna 180 Cam, yekutanga HomeKit-inogonesa kuchengetedza kamera
Uku hakusi kufambisa! Iyo yekutanga HomeKit-inogonesa kamera yakarova paApple online chitoro. D-Link's Omna 180 Cam yave kuwanikwa yekutenga online uye ichakurumidza kutengeswa muzvitoro zveApple kutenderera pasirese.
D-Link Omna 180 Cam HD iKeKit-enabled, kamera ye 1080p HD inopa imwe nzvimbo inonzi 180º yemaonero.
Chigadzirwa chacho chinoshandisa kufamba kwekuona, maviri-way audio (kureva mukurukuri uye maikorofoni), kadhi reC MicroSD rekurekodha kwekunze, IR LEDs yekuona mumamiriro ekudzivirira, uye svelte yakawanda yechipfigiro.
D-Link Omna ndiyo yako yakawanda yemapurasi paunouya kumata-makamera epamba, ponesa imwe tsanangudzo: HomeKit rubatsiro! D-Link yakabudirira kutora mutungamiri pamusika wemakambani ekuchengetedzwa kweKeKit-enabled.
Ndinovimba kukunda kweD-Link kunokurudzira makambani mazhinji kuti vatore makamera avo echikepe-chimiro uye kubuda mumusika munguva pfupi.
D-Link Omna 180 Cam inowana $ 199.99 muUnited States
Ndira 12, 2017 - Ecobee inoita Ecobee3's smart sensors HomeKit inowirirana.
Ecobee iri kuburitsa zvinyorwa zvayo ecobee3 smart Wi-Fi thermostat iyo inogonesa HomeKit kuwirirana nokuda kwekufamba kwayo uye masheji ekupisa. Iye zvino iwe unogona kushandisa svondo imwechete seSearchKit-yakagadzirirwa zvinhu zvako pachavo, kuwedzera misha yako yekugadzira musha!
Kana zvasvika kune smart thermostats, ini ndichati ino nguva uye zvakare: Ecobee's ecobee3 Smart Wi-Fi Thermostat iri zvakanakisa mari inogona kutenga. Haisi chete iyo iyo HomeKit-inogoneswa (inofanirwa kwandiri), asi inoisa chirevo chinobatsira icho mamwe akawanda ma thermostat haaite: kure kwemakamuri sensors ayo anoteedzera tembiricha nekufamba munzvimbo dzakasiyana mukati memba yako. Nei izvi zvichikosha? Nekuti haasi makamuri ese anotonhorwa (kana kutonhorera) zvakaenzana - iyo sensor inobatsira yako Thermostat kunzwisisa iyo chaiyeiye kupisa mumba mako, kwete nzvimbo yakapoteredza thermostat yako.
Chinhu chimwe chete chakandigumbura nezve ecobee3, zvakadaro, ndechekuti temburicha uye yekufamba inonzwa kugona kwakavharirwa kure kubva kuKKKit uye neAppApp Home app. Ecobee anofanira kunge andinzwa achichema ini kuti ndirare usiku pamusoro pazvo, nekuti ivo vakagadziridza firmware yavo kuti ipe vashandisi mukana wekufamba uye kupisa ma sensors!
Kana iwe uine ecobee3, chengeta maziso ako akataridzirwa firmware kugadzirisa 3.7.0.969 (iri kubuda). Panguva ino, iwe unogona kuronga mamwe madiki emakumi mashanu ehuchenjeri imba yako nekutarisa chidimbu changu pakuwedzera maAction uye neApple Home App. Funga nezvezvinogoneka!
Nzira yekugadzira kushandura muIOS Home app
Nenzira, kana iwe uchinge uchinge uri parusinga pamusoro pekuti ndeipi smart inoisa musoro wemba yako, tora kubva kwandiri: Iwe haugone kuenda zvakashata ne ecobee3.
Pakati pekodzero yeKeKit uye inowanikwa kure, inofambisa zvakanaka pane yapfuura mukwikwidzi. Zvaive zvinoshamisa kuti zviri nyore kugadzirisa, zvakare, izvo zvingave zvingangova nyaya ye mwe vakachena thermostats kunze uko.
Kana iwe uchimhanya iOS uye uri kutsvaga kuenda kunovheneka neHVAC yako, ndeye kwete-brainer.
Mbudzi 18, 2016 - KB Kumba inosheedzera HomeKit-inogoneswa San Jose zvivakwa
Kumba kamba kambani KB Home ndichangobva kuzivisa kuti vari kuvaka imba yangu yekurota, saka ndinofungidzira ndiri kurongedza kumusoro uye kuenda kuCalifornia!
Iko kambani iri kuvaka nzvimbo yepaSan Jose, California iyo inotamba mitambo yakawanda yepamba yakazadzwa nebhamu neKeKit-enabled accessories.
Kubva muhurukuro yekudhinda:
KB KB Vaimba vedzimba vanogona kungwarira uye kuchengetedza nekuchengetedza zvakachengetedza zviwanikwa zveApple HomeKit-zvakakodzera, zvakadai sokuvhenekera, magonhi emasuo nezvimwe zvinhu zvinodzivirira, nezvimwe, zviri nyore kubva pa iPhone, iPad kana Apple Apple.
Hazvizivikanwe kuti ndedzipi midziyo inowanikwa mudzimba nyowani, asi KB Home ine modhi yakagadziriswa dzimba pamwe zvese zvakabatanidzwa goodies! Yakatovhurika kushanya, saka kana iwe uri chero pedyo ne307 Adeline Street muSan Jose, iwe unofanirwa kuiongorora kunze.
Iko kuzivisa kubva kuKumba Kumba kunouya mushure mekunyorwa kwaTim Cook kweWWDC kwaakaratidza Apple ingadai iri kushanda nevadzidzisi vekuvaka kuvaka misha yakagadzirwa neKeKit kubva pakutanga.
Home automation dambudziko rimwe chete rakakura mararamiro kubatanidzwa. Vagari vekutanga kugamuchira uye vanofarira (seni) vari kunyatso kunyongedza zvishandiso izvi mukati uye mudzimba medu nemararamiro, asi kune vanhu vazhinji pane yakadzika yekudzidzira curve uye yakanyura inowira-shanduro curve.
"Chishongedzo chekuwedzera" chii ikozvino
Zvandinoreva ne "accessory-saturation curve" zvinowanzo kutora nguva yakareba kuti munhu avake imba yeKun-kugoneserwa. Vanotenga mwenje miviri, vanowedzera kukiya yakanakira, vanoisa internet-yakabatana fan, tora kamera, nezvimwe, asi izvo zvinogona kuita makore mazhinji emakore.
Iwo simba uye zviri nyore (uye kutaura kunaka) yemotokari shanduro, ini ndinoita nharo, haigone kuzikanwa kusvikira iwe uine zvekuwedzera-kugutsikana. Kana a HomeKit-enabled motion sensor inogona kutisa mwenje, tanga fan, uye udzore kupisa kamwechete kamwe - kuti isimba rekushandisa pamba. Kubhururuka nekubvisa kamwechete kamwe inzwi nezwi rako kunonakidza pakutanga, asi iko kurasikirwa kwaro kwapera mushure menguva pfupi. Izvo hazvina kusimba seyese-pamba imba-otomatiki setup.
Izvo, ndinofunga, ndechikonzero nei kuwana vashandi vekumba vanobatanidzwa mukugadzirisa kwekuita kuchava nyanzvi yekushanda kumba: Tichava nekutengesa-kutengesa kubvira pakuenda, tichitipa mukana wekuona simba rechokwadi rezvinhu izvi.
Gumiguru 26, 2016 - Elgato anovhura HomeKit-inogonesa Eve Mwenje Shanduko
Chimwe chezvipingamupinyi zvakaipisisa mumusha wekugadzirisa zvinhu zvinotora nzvimbo yako yekugadzira musha uye yekudzidzirazve tsika. Iwe unobva pakubhururuka kushandura pamadziro uchiraira vese vese vatsigiri nezwi rako kana kuputa pafoni nemunwe wako. Uye apo iwe paunopedza uchitora tsika itsva, zvinogona kuva kurwisa kudzidzisa vaenzi pamusoro pekugadzirisa chiedza, kupisa uye kunotonhora, mashizha, mapofu, nezvimwewo mumba mako.
Chitsva cheElgato Eve Chiedza Shanduko chinogadzirisa dambudziko iri nekubatanidza kujairana kwechiedza switch nekunaka uye - ini ndichazvibvuma - kuchena yeimba automation.
Elgato haisi kambani yekutanga yekupa iyo HomeKit-inogonesa mwenje switch. Lutron's Caséta Wireless mutsara ine HomeKit-inogonesa switch uye maimers. Musiyano, zvisinei, ndewekuti mutsara waLutron unoda chinzvimbo chepakati - chimwe chaunofanira kutenga zvakasiyana. Iyo Eve Light switchch inoshandisa Bluetooth LE iyo yakavakwa mukati mechinjiro, saka haudi kitsi rakaparadzana.
Zvakare, nekuda kweApple HomeKit uye iyo nyowani Imba yeApp app muSpy 10, unogona kudzora switch switch kana usiri pamba - unongoda an iPad kana Apple TV kuti ishande seHome Hub.
Unogona dzidza zvakawanda pamusoro peEvha Light Switch panzvimbo yaElgato.
Amazon Alexa Isiza mazai: Pamusoro pe180 zvinhu zvinosetsa kubvunza Alexa
Mazano nematipi eGoogle Nest Thermostat: Wana zvakanyanya kubva pakudzidza kwako thermostat
Yakanakisa HomeKit uye smart-epamba zvigadzirwa zvevaridzi ve iPhone
Zvakanakisisa zveGoogle Home 2022 Zvigadzirwa zvepamusoro zveGoogle Home zvekutenga nhasi
'Vaka A Bridge' Kubiridzira: Mhinduro & Mhinduro Dzese Matanho (iOS, Android)
Best smart speaker 2021: Iwo epamusoro smart maspika iwe aunogona kutenga kuUK